Faa'iidooyinka suuqa iyo rajada KOOWHEEL K8 hoverboard - Jomo Technology Co., Ltd
1. Xaaladda horumarinta isku dheelli mooto
2. Yeelo suuqa gaariga dheelitirka.
3. faa'iidooyinka suuqa K8 iyo Rajooyinka
Sanadihii la soo dhaafay, iyadoo casriyeyn ee isticmaalka, baabuurta tamar cusub - Baabuurta dheelitirka ayaa la jecel yahay by macaamiisha gudaha iyo dibadda ay ilaalinta deegaanka, muuqaalada dhaqaale oo ku haboon, macaamiisha ka casriyeyn ah ee baahida gaadiidka ka faa'iidaysan, suuqa dibada waa waasac, rajada horumarka la filayaa. Laga soo bilaabo warshadaha caalamka cusub gaari tamarta, gaariga isku dheeli tiran, baabuur smart noqon doonaa caadiga ah ee horumarinta mustaqbalka. Shiinaha waa dalka la soo saarka ugu weyn iyo dhoofinta isku dheelli mooto korontada ee dunida, xisaabiyenimo 90% ka mid ah warshadaha ee mooto Balance Global. Si kastaba ha ahaatee, ay sabab u la'aanta ah ee xeerarka khuseeya qoyska iyo heerarka, mooto korontada saaraha design wax soo saarka iyo habka wax soo saarka iyada oo aan hanuun caadiga ah, la'aanta kormeer, taasoo keentay in tayada wax soo saarka inuusan meel u saarneyn, suuqa sida rucubyo, copycat ah, suuqa waxaa daadadku la alaabta been abuur ah oo cashir, macaamiisha ma tilmaami karaa tayada sheyga. Waxaa xuquuqda sharciga ah iyo danahooda lama hubo, khataraha ammaanka Product ayaa ka dillaacay dhamaystiran ee sanadkii hore, keeno khasaare weyn macaamiisha, iyo si xun u wiiqay dhoofinta mooto korontada dheelitirka ee.
Badbaadada, tayada fittest wanaagsan ku dadaalaan horumarka caafimaad ee gaariga dheelitirka
Warshadaha wuxuu u baahan yahay ganacsatada in ay soo saaraan alaabta oo tayo leh, iyo dadka isticmaala waxay u baahan yihiin ganacsiyada in ay bixin karaan ammaanka. Wixii warshadaha dheelitirka gaariga ayaa weli soo food saartay dhibaato, shirkadaha u baahan tahay in wax laga qabto arrimaha warshadaha, is-u-eegida iyo isbedel iyo horumar degdeg ah, si tayada alaabooyinka u raadisid sida ugu horreeyey, xadaynta xeerarka warshadaha, iyo si wadajir ah u abuuraan jawi wanaagsan, waayo tartanka suuqa ee warshadaha hoos heerarka ammaanka adag. In view of kulul 6.5 inch caadiga ah mooto is miisaamid iibiyey oo ku saabsan baabuur dheelitirka suuqa. Dhinaca mid, qiyaasta warshadaha ee si degdeg ah u fidiya, laakiin dhinaca kale waa tartan wareersan. "Personage A gudaha koorso waxbarasho ku muujinayaa in wariyaha. Sababo la la'aanta ah ee heerarka, qaar ka mid ah mooto dheelitirka korontada saarayaasha isticmaali qaybaha liita, laba shirka iyo siyaabo kale si loo yareeyo kharashka, waa buunbuunin lahayn in la yidhaahdo, tartankaan sharta ka dhigi karaa warshadaha oo dhan si deg deg ah ku noqdo eber, this boqol bilyan oo yuan , size suuqa of warshadaha baabuurta dheelitirka ayaa sidoo kale wajihi doonta khatar weyn.
Sida loo baabi'iyo cayayaanka on warshadaha iyo joogtaynta caafimaad fiican warshadaha dheelitirka baabuurka, technology KOOWHEEL ka kaliya ilaa qarka u saaran inuu hadda ayaa u hoggaansanaayeen tayada iyo ammaanka ugu horeeya, si ay u gaaraan eber shilalka, si ay u siiyaan ammaanka nabadgelyada ee macaamiisha. Sida loo tartan la 6.5 inch hoverboar a liita suuqa, badbaadada ee fittest sagaal khilaaf aan mar dambe rajaynaynaa in caadiga ah 6.5 daydo inch, laakiin doorashada ee ayna iyo hal-abuurnimo, in la siiyo macaamiisha design 6.5 inch K8 cusub mooto dheelitirka korontada si ay ula kulmaan baahida suuqa waxay yeelan doontaa qiimaha sare si uu u bedelo caadiga ah 6.5 inch ah ma jirin isku midka ah ee taariikhda.
Faa'iidooyinka suuqa K8 iyo Rajooyinka
1. waxyaabaha model gaarka ah.
Loogu talagalay by Italy Milan, muuqaalka qabow iyo mid gaar ah, mabda'a dhismeedka gaarka ah, waxaa la fadilay by macaamiisha Yurub iyo Maraykanka. Jebi, muuqaalka jirka iyo jebin ah caqabadaha takooriddu patent
2. PCB Taotao nidaamka dual
Waxa laga hirgeliyey nidaamka motherboard dual shirkadda sayniska iyo farsamada Taotao. Marka la barbar dhigo suuqa cheap brand-magaca nidaamka hal motherboard ah, Taotao leeyahay xasilooni ka fiican labada nidaam, waa sahla ilaalinta ammaanka qof ahaaneed ee dadka isticmaala.
Taotao Tech: 1, PC, ugu muhiimsan, guddiga, la, 2pcs, gyroscopes.
Fasalka-koowaad motor tayada ee Hong Hong Motors ayaa faa'iidooyinka dammaanadda tayada, fardaha siman iyo buuq lahayn.
nooca Power pack batari, nolosha dambe. Koowheel K8 isticmaalaa 14 xoogga core badbaadinayo 24V batari guriga leh baakad batari xoog, nolol dheer iyo ilaalinta dabka, ayaa lagu tijaabiyey, ordo fog ka badan dhigooda suuqa 36V mooto dheelitirka, xoog weyn!
pack batteriga laga sameeyey qalab dabka, oo ay tahay ammaan badan baakadka jilicsan adeegsaday asxaabta ka
5. xadhko Hand
Iyada oo Xadhig qaadi karo nooca jillaab ku, waxaa la mashquulsanayeen karo, qurux badan oo ku haboon, iyo in la leedahay karaa, la gaari isku dheeli tiran ee caadiga ah 6.5 inch marka la barbar dhigo. Waa sahlan tahay si ay u fuliyaan la boorsadaada no
6. qiimaha faa'iido